Taariikhda Jarmalka, goobta juquraafi ahaan, cimilada Jarmalka iyo dhaqaalaha
Jarmalka, oo magiciisa lagu sheegay Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka ilaha rasmiga ah, wuxuu qaatay qaabka Jamhuuriyadda Federaalka iyo caasimaddiisu waa Berlin. Markaad tixgeliso dadka, wadarta guud ee dadka waddanka, oo ay ku nool yihiin wadar ahaan dad ku dhow 81,000,000, ayaa lagu muujiyey inay yihiin 87,5% muwaadiniinta Jarmalka, 6,5% muwaadiniinta Turkiga iyo 6% muwaadiniinta umadaha kale. Waddanku wuxuu adeegsadaa Euro € lacagtiisa oo lambarka taleefanka ee caalamiga ahi waa + 49.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, Mareykanka, Gobolladii Ingiriiska iyo Faransiiska gumeysanayey midoobeen iyo Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka, oo la aasaasay 23-kii Maajo, 1949, iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Jarmalka, oo lagu muujiyey inay tahay Jarmalka Bari oo la asaasay 7dii Oktoobar 1949 , midowday oo sameysay Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka 3dii Oktoobar 1990.
Mawqifka juquraafi ahaan
Jarmalka waa wadan ku yaal Bartamaha Yurub. Denmark oo ku taal waqooyiga, koonfurta Austria, Czech Republic iyo Poland oo bariga ah, iyo Netherlands, France, Belgium iyo Luxembourg oo ku taal galbeedka. Waqooyiga dalka waxaa ka xiga badda woqooyi iyo badda baltiga, koonfurna waxaa ka xiga buuraha Alpine, halkaasoo dalka ugu sarreeya uu yahay Zugspitze. Iyadoo la tixgelinayo joqraafiyada guud ee Jarmalka, waxaa la arkaa in qeybaha dhexe ay u badan yihiin keymo oo bannaanka uu kordho markaan u dhaqaaqno dhanka woqooyi.
Cimiladu waa mid dhexdhexaad ah dalka oo dhan. Dabaylaha wabiga-galbeed iyo mawjadaha kulul ee ka imanaya Waqooyiga Atlantikka waxaa saamayn ku leh cimilada khafiifka ah. Waxaa la dhihi karaa cimilada qaaraddu waxay waxtar badan leedahay marka aad aadeyso qaybta bari ee dalka.
Jarmalku waa waddan leh caasimad xoog leh, dhaqaalaha suuqa bulshada, shaqaale xirfad badan iyo heerar musuqmaasuq oo aad u hooseeya. Dhaqaalaheeda xoogan, waxaan dhihi karnaa Yurub ayaa ugu horeysa adduunkuna waa kan afraad. Bangiga Dhexe ee Yurub ee fadhigiisu yahay Frankfurt wuxuu maareeyaa siyaasada lacagta. Markaad fiiriso meelaha ugu horeeya warshadaha dalka, meelaha sida baabuurta, teknoolojiyada macluumaadka, birta, kiimikada, dhismaha, tamarta iyo daawada ayaa muuqda. Intaas waxaa sii dheer, wadanku waa dal hodan ah oo leh kheyraad sida birta macdanta, naxaasta, dhuxusha, nikkel, gaaska dabiiciga iyo uraniumka
# Mawqifka juquraafi ahaan